Branddị Mbido Gị Dị Njikere maka CES? Mkpa Mbata Ndepụta maka Oge Mbido | Martech Zone
O doro anya na ị nụla akụkọ sitere na ihu ihu na ị heedara ntị n'ịdọ aka na ntị sitere n'aka ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ọtụtụ puku ndị ọchụnta ego debara aha ha kwa afọ maka ọnwa Jenụwarị a kacha mara amara CES (Consumer Electronics Gosi) na Las Vegas maka oge mbụ n'afọ a (Jenụwarị 9-12th), ọ nwere ike isiri ike iji uche hụ ihe dị n'ihu gị.
Kedu maka nke a: Cheedị echiche banyere nnukwu ọnụ ụlọ egwuregwu bọọlụ na nnukwu ụlọ nzukọ jupụtara na ya nke nwere ọtụtụ nde ndị na-eyi lanyard, ndị azụmaahịa na-eyighị eyi teknụzụ na-awagharị n'etiti ọtụtụ puku ụlọ ntu na tebụl ndị na-achọ ịdọ aka na ntị n'etiti ọgba aghara ahụ. N'ime igwe mmadụ, ngosipụta siri ike, na-egosipụta ngosipụta sitere na ụdị kachasị na ụwa - chee Sony, Samsung, Ford na ndị ọzọ - ga-ebili karịa nri, dịka 87% nke ndị ngosi na CES bụ ụlọ ọrụ Fortune 100. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ narị ndị ọzọ ga-etinye aka na akara ebe ọ bụla anya pụrụ ịhụ, site na ụlọ ịsa ahụ na ndị na-ebu kọfị na ihe ọ bụla dị n'etiti.
Ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ndị na-ebido ebido, ị gaghị enwe elele nke nnukwu ụlọ ndozi ego na elu ụlọ mgbakọ (nke nwere ike ị efu gbagoo $ 50K maka ụlọ ntu 10 × 10). Ọ bụrụ na ị bụ mmalite ọhụụ nke nwere oke ego, ị nwere ike ịtụle ụdị dị ọnụ ala karịa Ogige Eureka - oghere a raara nye kpọmkwem ka ịmalite, okpokoro na otu ihe ngosi mgbasa ozi abalị dị ka Ndị na-egosi ihe nkiri, ma ọ bụ ọbụna na-edebe otu ụlọ n'otu n'ime họtel ndị dị n'akụkụ ebe mgbakọ ahụ.
Agbanyeghị, ihe ị nwere ike - na nke ị kwesịrị ime - opekata mpe bụ ijide n'aka na akara ị ga-egosipụta mgbe ị zutere onye ọ bụla ebe ahụ, ma n'ụlọ ntu, na tebụl ma ọ bụ naanị ịgafe ụlọ ngosi ahụ, na-eme ka echiche kacha mma. kwere omume.
N'okpuru ebe a bụ ọkpọ-anụ, ndepụta nyocha iji hụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị dị njikere izute ndị mmadụ na CES afọ a.
Headedgaghị na ara nke akpọrọ CES? Ọtụtụ n'ime ndụmọdụ ndị dị n'okpuru metụtara ihe ọ bụla kachasị ụlọ ọrụ ahia ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị ga-aga na afọ a. Dị ka anyị niile maara, igosi ma ọ bụ ọbụna ịga na netwọk a tradeshow bụ mmega ahụ dị oke ọnụ, ya mere, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya iji bulie ọnụnọ gị site na itinye ụkwụ gị kacha mma.
Na-agbanwe agbanwe ihe onwunwe site na akara ngosi gị na ala - Jide n'aka na inweela ọkachamara, akara ngosi mara mma na ntuziaka akara nke enwere ike ịmegharị maka ụdị ntụkwasị, uwe, na akara ngosi ịchọrọ ịmepụta. Akara ngosi omenala iji kwado ọtụtụ ngwa ga-enyere akara gị aka pụta, ọbụlagodi na mmemme dị ka CES.
Zuru okè n'oge a, ewepụghị imewe logo maka ọtụtụ ngwa. Akara imewe site na blancetnoire maka Ego Ego.
Melite ọnụnọ gị n'ịntanetị - Tupu ị banye na Vegas, gbaa mbọ hụ na webụsaịtị gị dị ọhụrụ (ozi kọntaktị ziri ezi na nke ugbu a, pịa ụlọ nwere mkpuchi na nso nso a na mbipụta akụkọ, wdg) na nke kachasị mkpa, na-anabata ekwentị. Ọ bụ ezi echiche iji hụ na emelitere ọwa mmekọrịta gị yana na mmadụ na saịtị ahụ na-enyocha mmekọrịta na ngwụsị izu niile.
Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa ọgbara ọhụrụ, nke ọhụụ, gbaa mbọ hụ na webụsaịtị gị dị ọfụma ma na-anabata ya. Nhazi weebụsaịtị nke Denise M.
Isiokwu ma ọ bụ othlọ Ntuzi na Handouts - Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ igosipụta ngwaahịa ma ọ bụ ihe nlele na tebụl gị, tụlee ịmepụta obere akara ngosi iji dọrọ uche ndị bịara ya na ha. Nwere ụdị beta nke ngwaahịa gị maka ndị bịara iji nwalee? Tinye ozi ahụ ebe a. Chọrọ inye ndị bịara koodu promo? Tinye ego na mpempe akwụkwọ agba agba agba anọ maka mgbasa ozi na ndị ọzọ ka ha were n'ụlọ ntu gị ka ị ghara idafu ndu ahụ.
Akara - N'ihe banyere akara aka, jide n'aka na ị matara akụkụ ị ga-arụ ọrụ na tebụl ma ọ bụ ụlọ ntu ị debere. O yikarịrị ka ị na-arụ ọrụ na obere oghere ma ghara inwe mgbidi iji tinye ọkọlọtọ. Nke ahụ pụtara na ị ga-ebute ọkọlọtọ na-akwụghị ụgwọ. Fọdụ oké ọnụ isi mmalite maka ndị a: Ihe ịrịba ama ngwa ngwa na Ngosipụta2go. Mgbe ị na-eke akara gị, guzogide agụụ ịpịpụta okwu ọ bụla bara uru maka ụlọ ọrụ gị na ebe enwere ike ibipụta; njirimara gị na akara ngosi dị mfe, echefu echefu nke enwere ike ịgụ site n'ebe dị anya kachasị mma.
Onyinye - Onyinye ego bụ ohere gị iji mepụta okike. Tụlee ihe ndị mmadụ chọrọ na nke kachasị mkpa n'ụdị ihe omume ndị a. Okwesighi ịbụ onye nwere oke nghọta - a ga-echeta gị nke ọma site na ịnye ihe bara uru na iche echiche banyere mkpa onye ọrụ ahụ. Chee echiche ume, akpa akpa iji buru swag, ma ọ bụ akara ngosi. Oge agwụla? Gaghị enwe ike iji swiiti mee ihe na-esighi ike.
Ihe nkiri vidio - Ọ bụrụ na ị kpebie inwe ngosipụta vidiyo na ụlọ ntu gị, ị ga-achọ ihe ga-adọrọ uche ndị mmadụ ma ọ bụghị ịdabere na ọdịyo (ebe ọ ga-abụ na ọ ga-abụ oke mkpọtụ n'ụlọ nzukọ). Vidio gị kwesịrị ịkwụ ọtọ naanị site na ihe ngosi na ederede. Nke a bụ ebe ị na-ekwesịghị ịtụ ụjọ ịme ihe - ọ bụ maka ịchọta ụzọ ọhụụ iji dọta uche ịmalite mkparịta ụka.
Uwe - Ma ọ dịkarịa ala, chọọ ịchọta ọkachamara na nkecha. Ọ bụrụ n’inwere ike ịpụta maka ihe dabara adaba, ụdị tshirts ma ọ bụ uwe ojii maka ndị ọrụ ụlọ ntu gị, mee nke a. Ọ ga - eme ka ahụmịhe gị na akara gị ka ị kpọkwuo ya na echefu echefu.
Ihe Mgbasa Ozi Dijitalụ - Tinye ihe nkesa mgbasa ozi dijitalụ gị. Chọrọ ka ọ dịrị njikere maka ndị nta akụkọ ka ha ghara ichere ma ghara ịhapụ ohere ọ bụla. O kwesịrị ịgụnye ozi ụlọ ọrụ, kaadị azụmahịa gị, nkọwapụta ngwaahịa na ozi, akara ngosi, onyonyo, ozi kọntaktị, na ihe ọ bụla ọzọ ị chere onye nta akụkọ nwere ike ịchọrọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnwe ihe ndị a niile dị n'ịntanetị yana itinye njikọ maka ngwa a pịa na kaadị azụmaahịa gị.
Kaadị azụmahịa - Anyị maara, anyị maara… ọ bụ 2017 ma anyị ka na-ekwu maka kaadị azụmaahịa. Mana na ihe omume dịka CES, akara ngosi a dị ka ihe ochie sitere n'oge gara aga ka nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji chetara ndị kọntaktị ọhụrụ ka ha jikọọ mgbe emume ahụ gachara (wee tụgharịa kaadị azụmaahịa gị ozugbo na ihe eji emegharị ihe). N'iburu nke a n'uche, tụlee ịmụgharịgharị nke gị tupu ihe ngosi ahụ, ma hụ na onye ọ bụla na-aga nnọchite ụlọ ọrụ gị nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye. Jide n'aka na ịhapụ ụfọdụ oghere ọcha na kaadị maka onye nnata ka ha dee onwe ha ihe ederede mgbe nzukọ gị gasịrị - tinyere "echefula na ị zitere onye a ozi!"
Akwadoghị ụdị, kaadị azụmahịa ụdị egwuregwu ga-echetara onye ọ bụla ụdị ahịa gị. Nhazi kaadị azụmahịa nke Platinum78 maka Dais.
Yingnwale ya niile
CES bụ ohere ọla edo maka ụdị ụdị teknụzụ ndị ahịa ọ bụla, n'ihi na ọtụtụ ụdị n'ụdị a nwere ọnụnọ siri ike ebe ahụ. Jiri ohere ahụ mee ihe n’ụzọ kasị mma site n’ịdị njikere maka ihe omume ahụ. You'll ga-enwetachaghị CES, ị ga-anụrịrị ogbako ahụ karịa.
Tags: 2017adọtaụlọ ndò signageihe mbọnkaadị azụmahịaCESnkwonkwonyeihe ntanetị dijitalụOgige eurekagiveawayslogoite egoegoOdi Ohu ohuruweebụsaịtị zara ajụjụihe ngosiakaratebụl signageebe nrụọrụ weebụvidiyo vidiyowebsiterụọ ọrụ